Ukulingisa service - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Isevisi Yokulingisa Ngokwezifiso Ngokwezifiso Umkhiqizi Wokuphonsa Izingxenye Zokufa
U-Ouzhan ungumholi womhlaba ngokunemba ekufeni, ubelokhu ekhethekile ekuhlinzekeni izinsizakalo zokunemba ngokunemba kwabasebenzi amashumi eminyaka. Yize izimpande zika-Ouzhan zilele kwinqubo yethu yokuphonsa ama-multi-slide die casting sinamandla ngokulinganayo ekwakhiweni kwezingxenye ezinkulu ngezindlela ezivamile ezishisayo nezibandayo zokufa.
I-die casting iyindlela esheshayo, engabizi kakhulu yokwenza inqubo yokukhiqiza ivolumu ephezulu, emise okwenetha, izingxenye zensimbi ezibekezelelanayo. Imvamisa, izingxenye zokufa zingafakwa futhi zisetshenziswe ngaphandle kokuphenduka okuqhubekayo, futhi izingxenye ezifakiwe zingaphonswa ngqo. Isikhunta sinempilo ende, futhi isikhunta sokufa ngokuvamile singakhiqiza noma yiliphi inani lezinto, kusuka kumakhulu ezinkulungwane kuya ezigidini.
Kusuka ezingxenyeni ezincane ezinjengezingxenye ezijwayelekile zekhamera, izingxenye zokubhala, amadivayisi we-elekthronikhi wokuhlobisa kanye nokuhlobisa, kanye nezingxenye eziyinkimbinkimbi zezimoto ezinjengezimoto, izitimela, kanye nezindiza, eziningi zazo zenziwa ngokukhishwa kwe-die casting.
Amakhono nezici ze-Ouzhan Precision Die Casting
- Ukukhiqizwa kwenqwaba engabizi kakhulu
- Ukuhlanganiswa okuyingxenye kuqeda ukusebenza
- Amandla okukhiqiza ubujamo obuyinkimbinkimbi
- Ikhwalithi ephezulu esitebeleni ekukhiqizweni
- Ukubekezelelana okuqinile ekubunjweni kokufa
- Impilo ende yesikhunta
Kungani Khetha Ouzhan Die Casting Services
1. Uma sithola imibuzo evela kumakhasimende, sizohlola kuqala ukuze sibone ukuthi singakwazi yini ukukhiqiza. Uma kungenzeka, nangemva kokuba iphrojekthi isivunyiwe, sizothumela ikhotheshini.
2. Ukugeleza kwethu kwezinsizakalo kumaphrojekthi amasha
• Ikhasimende libeka isikhunta noku-oda amasampula.
• Sikhipha i-PI kuma-50% wezindleko zesikhunta ukukhokha idiphozi.
• Thumela imidwebo yokwakha isikhunta seklayenti ukuze ivunyelwe.
• Qala ukukhiqizwa kwesikhunta ngemuva kokuthola idiphozi engu-50%.
• Thumela amasampula namanye amadokhumenti afana nesitifiketi sezinto ezibonakalayo kanye nombiko wokuhlola ukuze uvunyelwe.
• Ukukhiqizwa kweMisa ngemuva kokuvunywa kwamasampuli.
Sinabanjiniyela abayi-10 esikhungweni sethu se-R & D, bonke bangodokotela noma oprofesa base-University of Science and Technology of China. Singahlinzeka ngosizo lobuchwepheshe bokufa ekubunjweni kwesikhunta.
Iyini Isevisi Yokuphonsa I-Die & Ukusebenza Kokuphonsa Ukufa
Die thusi ubizwa nangokuthi ingcindezi thusi. Kuyindlela yokuphonsa lapho kuthululwa khona oketshezi lwe-alloy encibilikisiwe egumbini lokucindezela, umgodi wesikhunta sensimbi ugcwaliswa ngejubane elikhulu, futhi i-alloy liquid iyaqina ngaphansi kwengcindezi yokwenza ukusakaza. Izici eziyinhloko zokusakaza okufa okukuhlukanisa nezinye izindlela zokuphonsa ingcindezi ephezulu nesivinini esikhulu.
Metal Insimbi encibilikisiwe igcwalisa umgodi ngaphansi kwengcindezi, futhi ikhanyise futhi iqine ngaphansi kwengcindezi ephezulu, ingcindezi ejwayelekile ingu-15-100MPa.
Metal Insimbi encibilikisiwe igcwalisa umgodi ngesivinini esikhulu, imitha eyi-10-50 ngomzuzwana, kanti amanye angadlula amamitha angama-80 ngomzuzwana (ijubane eliqondile lomgodi ngesango langaphakathi-isivinini sesango langaphakathi), ngakho-ke insimbi encibilikisiwe Isikhathi sokugcwalisa sifushane ngokwedlulele, futhi umgodi ungagcwaliswa cishe ngemizuzwana engu-0.01-0.2 (kuya ngosayizi wokuphonsa).
Izinzuzo die ekubunjweni zifaka omuhle kakhulu ntathu ngokunemba castings. Imvamisa lokhu kuncike entweni yokusakaza. Inani elijwayelekile lingu-0.1 mm ngosayizi wokuqala ongu-2.5 cm, kanye no-0.002 mm nge-cm ngayinye eyengeziwe. Uma kuqhathaniswa nezinye izinqubo zokusakaza, indawo yayo yokusakaza iyashelela, futhi irediyasi ye-fillet icishe ibe ngu-1-2.5 microns. Uma kuqhathaniswa nebhokisi le-sandbox noma izindlela ezihlala njalo zokuphonsa isikhunta, ukukhiqizwa okunobunzima bodonga cishe okungu-0.75 mm kungakhiqizwa. Ingasakaza ngqo izakhiwo zangaphakathi, ezinjengemikhono yocingo, izinto zokufudumeza, nezindawo ezinamandla amakhulu. Ezinye izinzuzo zifaka phakathi ikhono layo lokunciphisa noma lokugwema ukusetshenzwa kwesibili, isivinini sokukhiqiza esisheshayo, ukuphonsa amandla okuqina afinyelela ku-415 MPa, nokuphosa izinsimbi eziphakeme kakhulu.
Izinto Zokulingisa ze-Die - Izinto ezisetshenziselwa i-Die Casting
Izinsimbi ezisetshenziselwa ukusakaza okufayo ikakhulu zifaka i-zinc, ithusi, i-aluminium, i-magnesium, i-lead, i-tin, ne-lead-tin alloys. Yize i-die-cast iron ingandile, kuyenzeka futhi. Izinsimbi ezikhethekile zokuphonsa izinsimbi zifaka phakathi i-ZAMAK, ama-alloys e-aluminium-zinc kanye namazinga we-American Aluminium Association: AA380, AA384, AA386, AA390 ne-AZ91D magnesium. Izici zezinsimbi ezahlukahlukene zimi kanje:
• I-Zinc: Insimbi elula kunazo zonke yokufa, kuyonga ukhiqiza izingxenye ezincane, okulula ukugqoka, amandla aphezulu okucindezela, ipulasitiki ephezulu, nempilo ende yokusakaza.
• I-Aluminium: Ukukhanya okulula, ukukhiqiza okuyinkimbinkimbi kanye nokujikijelwa okubiyelwe okuncane kunokusimama okuphezulu, ukumelana nokugqwala okuqinile, izakhiwo ezinhle zomshini, ukuqhuba okuphezulu kokushisa nokugesi, namandla aphezulu emazingeni okushisa aphezulu.
• I-Magnesium: kulula ukuyenza ngomshini, isilinganiso samandla esesisindo esiphakeme, okulula kunazo zonke izinsimbi ezisetshenziswa kakhulu ezisetshenziswayo.
• Ithusi: Ubulukhuni obuphakeme, ukumelana nokugqwala okuqinile, izakhiwo ezinhle kakhulu zezinsimbi zokuphonsa ezisetshenziswa kakhulu, ukugqokwa kokuqina, namandla asondele ensimbi.
• Ukuhola nethini: ukuminyana okuphezulu, ukunemba okuphezulu, kungasetshenziswa njengezingxenye ezikhethekile zokulwa nokugqwala. Ngokucatshangelwa kwezempilo yomphakathi, le ngxubevange ayinakusetshenziswa njengempahla yokulungisa nokugcina ukudla. I-alloy yomthofu, i-tin ne-antimony (kwesinye isikhathi iqukethe ithusi elincane) ingasetshenziselwa ukwenza uhlobo lwencwadi kanye ne-bronzing ekuphrintweni kwe-letterpress.
Imikhawulo ephezulu yesisindo sokuphonsa ukufa kusetshenziswa i-aluminium, ithusi, i-magnesium ne-zinc zingama-70 lb (32 kg), 10 lb (4.5 kg), 44 lb (20 kg) kanye nama-75 lb (34 kg) ngokulandelana.
Ezinye Izinsizakalo Zokulingisa Ezitholakalayo
Ukulingiswa kwe-Die kungenye yezinqubo eziningi zokulingisa. Njengoba umfula imifula ukucutshungulwa ifektri, OuZhan Ubuye ezihlukahlukene ezinye ekubunjweni isitshalo imithombo esezansi. Singanikeza amakhasimende nganoma iyiphi enye insizakalo yokusakaza:
1.Sand isikhunta thusi indlela
Kusetshenziswa isihlabathi njengokutholwa kwesikhunta, isihlabathi esinezingoma ezihlukile singahlukaniswa sibe yisikhunta esihlaza esiluhlaza, isisekelo sokubumba isihlabathi esomile, njll., Kodwa hhayi sonke isihlabathi esingasetshenziselwa ukusakaza. Ubuhle ukuthi izindleko ziphansi ngoba isihlabathi esisetshenziswe ekubunjweni singaphinde sisetshenziswe; Okubi ukuthi ukukhiqizwa kwesikhunta kudla isikhathi, isikhunta uqobo asinakusetshenziswa kabusha, futhi umkhiqizo ophelile ungatholakala kuphela ngemuva kokubhujiswa.
2. Metal isikhunta ekubunjweni indlela
Sebenzisa insimbi enephuzu lokuncibilika eliphakeme kunaleyo eluhlaza ukwenza isikhunta. Phakathi kwazo zihlukaniswe amandla adonsela phansi, indlela ephansi yokuphonsa ingcindezi nendlela ephezulu yokulingisa. Ngokuya ngephuzu lokuncibilika kwesikhunta, insimbi engafakwa nayo ibekelwe imingcele.Ukukhishwa kweDie kungokwezindlela zesikhunta zensimbi.
3. Indlela elahlekile ye-wax
Le ndlela ingaba yindlela yangaphandle yokusakaza ifilimu nendlela eqinile yokusakaza. Le ndlela inokunemba okuhle futhi ingasetshenziselwa ukuphonsa izinsimbi eziphakeme zokuncibilika (njenge-titanium). Kodwa-ke, ngenxa yentengo ephezulu yobumba, kanye nesidingo sokushisa okuningi nokukhiqiza okuyinkimbinkimbi, izindleko zibiza kakhulu.
Izicelo ze-Die Casting Services kanye Nezingxenye
I-Ouzhan Die Casting Surface Iqedile